Nhau - Chiziviso 2021 Q1
Gore ra2021 rauya nesimba rakadzama kubva kuhutano hwepasi rose hwehutano (COVID-19), iyo yakaunza kwete chete njodzi huru kuhupenyu uye hutano hwevanhu munyika zhinji, asi zvakare yakaunza njodzi huru kuhupfumi hwenyika. budiriro.
Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, pamwe nekuvandudzwa kwehunhu hwevanhu, tine chivimbo chekuti denda rinozokundwa Asi tinofanira kuziva zvakajeka kuti, nekuda kwesimba kubva kudenda, hupfumi hwepasi rose hunofanira kupora mukufamba kwenguva. Zvakare, isu tinofanirwa kuve nekuziva kwakaringana uye kwakadzama kwekugadzira, kuendesa uye kutakura, munguva yepashure pehosha.
Mitengo yezvinhu zvakagadzirwa yave ichikwira zvakanyanya kubvira 2020Q4. Iyo mitengo yeacetone uye phenol yakave yakapetwa kaviri kubvira 2020Q3, iyo yakasimudza mitengo yezvigadzirwa zvedu. Kukwira kwemitengo yezvimwe zvinhu zvakasvibirira zvave chinhu chikuru mukugadzirwa kwemakemikari. Iri boka rese riri kutambura zvakanyanya kubva nekukwira kwemitengo, sezvo zvakawanda mbishi zvigadzirwa zvinotengwa kubva kuChina mainland.
Zvakare, nekuda kwekukanganiswa kwedenda re COVID-19, kugona kwepasi rose kwakaderera zvakanyanya, zvichitungamira kukwira kwakasimba mukutakura kwekutakura kwegungwa. Kuunganidzwa kwechiteshi, midziyo isina kurongedzwa zvishoma yakawedzera kukwira kwemitengo mumusika wekutakura kwegungwa. Kutakurwa kwemhepo yezvirwere zvekudzivirira zvekudzivirira zvakare kusundira kukwira kwemutengo mumusika wekutumira mweya Zvinoratidza kuti avhareji mari yekutumira yakarova pamusoro mumakore gumi apfuura.
Iyo RMB iri kuramba ichikoshesa kubvira 2nd hafu ya2020. Inotsigirwa neSino-US chiyero chemutengo kusiyanisa uye kudiwa kwakasimba kubva kune vekunze vatengesi vezvinhu zveChinese, iyo RMB inotarisirwa kunge ichikoshesa mberi muna 2021. Nekudaro vekunze veChinese vanotarisana nedzvinyiriro huru kubva kuonga kweRMB.
Kupedzisa, kuwedzera mitengo yekugadzira, kupa kwakasimba, yakakwira mari yekutumira, chiyero chekutsinhanisa achiri mazwi akakosha mu (zvirinani) 1st hafu ya2021 yemakemikari indasitiri.
Isu tinonamatira kune revatengi sevhisi, uye nekuona kupihwa sekutanga chinangwa. Isu takaedza nepatinogona napo kuti tiwedzere kuwedzerwa kwemutengo uye kuchengetedza makotesheni, asi isu tinochengetedza kodzero yekugadzirisa mitengo zvinoenderana nekuchinja kwemusika pazvinenge zvichidikanwa. Kunzwisisa kwako kwemutsa kunokosheswa.
Ndinokutendai nerutsigiro rwenyu nguva dzose.